Ukudonswa Kanjani Komfula weSaladao Kwangathi Kungasindisa AmaBuenos Aires - ama-Ellicott Dredges
Ama-Dredges nezinsiza kusebenza
Ama-Ductionges we-Carterterter Suction ophathekayo
Ama-Dredge Booster Pumps
Izingxenye Zokubumba kanye Nesevisi
I-Ellicott Dredges In Action
I-Free Toll: + 1 888-870-3005 410-625-0808 Isitaladi i1611 Bush, eBaltimore, MD 21230, e-USA sale@dredge.com
Ukudonsa Kanjani Umfula iSalado ngoMeyi Kungasindisa iBuenos Aires
Ukwehlukanisa kabusha uMfula iSalado kuyithinta kanjani iBuenos Aires? Umlando wakamuva ukhombisile ukuthi isibalo esikhulu semvula esifundeni esisezingeni eliphansi sidale ukuthi umfula iSalado ugcwele futhi usongela umphakathi wezolimo. Kuze kube muva nje umfula ubungakagcinwanga kahle. Lokhu kudale ukuthi kube nezikhukhula zangaphambilini. Ukuxhaswa ngezimali kwakamuva manje kwenza ukuthi kukhokhelwe intuthuko emfuleni nasezindaweni ezizungezile futhi nokufinyelela kokufanele imishini yokudonsa lokho kuzosiza ukulawula izikhukhula ezingaba khona ngokubuyisela umfula esimweni sawo semvelo.
UMfula iSalado nomphumela wawo
Kusukela ngo-2000 kuya ku-2017, umhlaba ongaphezu kwamahektare angama-800,000 walinyazwa kulo lonke elaseBuenos Aires, e-Argentina, ngenxa yezikhukhula zomfula iSalado River. Idolobha laseBuenos Aires liyinhloko-dolobha yase-Argentina nedolobha elikhulu kunawo wonke ezweni. Umphakathi ochumayo utholakala esifundazweni saseBuenos Aires, ngasesizalweni somfula iRio de la Plata. Okungenziwa ngabantu abaningi bangaphandle ukuthi isifundazwe saseBuenos Aires umphakathi omkhulu wezolimo. Cishe ama-20% wemikhiqizo yokusanhlamvu nenyama yase-Argentina ivela esifundeni futhi ithathwa njengebaluleke kakhulu emnothweni wezwe. Umhlaba omningi esifundazweni ucebe kakhulu ngezakhamzimba, kodwa futhi uyisicaba kakhulu futhi usengozini yezimo zezulu ezimbi kakhulu eziholele ekutheni kube nesomiso esihlasele kanye nezikhukhula.
I-Ellicott Series 1270 Dragon® Dredge
Kunemifudlana eminingana, imifula kanye nemifula etholakala ngaseBuenos Aires. Eminyakeni engama-40 edlule, isilinganiso semvula eBuenos Aires sikhuphuke ngama-20%. Imvula eyengeziwe idale ukuthi uMfula iSalado ugcwale. Izindawo ezingasemngceleni womfula njengoMfula iSalado zivame ukuba nezikhukhula ngezikhathi zezulu zezulu. Eminyakeni eminingana, uMfula iSalado uqoqe izinto zokwakha ezahlukahlukene ngenxa yemvula enkulu, eqoqa umthamo omkhulu wentlenga nodaka. Lapho umfula unganakekelwa ngokwanele, imfucumfucu izobuthana ngokuhamba kwesikhathi, yenze umfula ube yibhodlela. Lesi senzo sivimbela amandla emifula ukuhlinzeka ngamanzi agelezayo ngokwemvelo futhi abangele amazinga wamanzi ukuthi anyuke, okudala isikhukhula.
Iminyaka eminingana, abaholi bomphakathi kanye nabezepolitiki baxoxisane ngemibono nezisombululo ezahlukahlukene ezifana nokwandisa umfula nokumba isiteshi esijulile ngethemba lokunciphisa izikhukhula kodwa behluleka ukukhulisa imali edingekayo yokukhokhela izindleko ezinkulu kangaka iphrojekthi yokunciphisa umfula kuze kube muva nje.
Ama-Series amabili we-1270 Dragon® Dredges emsebenzini eMfuleni iSalado
Ngo-Ephreli we2017, iBhange Lomhlaba livume a $ 300 isigidi semalimboleko fnoma iphrojekthi yokuvikela izikhukhula. Ezinyangeni eziyi-18 ezedlule, osonkontileka abaningi bokudonsa bachitha isikhathi esiningi besebenza ukuthuthukisa izimo zezikhukhula kule ndawo. Kuze kube manje osonkontileka sebesuse ngaphezulu kwesihlabathi esingu-5.23 million yd³ (4 million m³) sesihlabathi nentlenga eMfuleni iSalado besebenzisa uchungechunge lwamadwala.
Ukusiza ukulawula izikhukhula esifundeni sendawo, ukukhipha amanzi eqenjini kusuka IHelport neChediack (UTE) ukhethe ukukhetha ukusebenzisa i-Ellicott Series 1270 Dragon® cutter suction dreges abalungele lolu hlobo ukuguguleka komfula isicelo. I-1270 Dragon® dredge iyakwazi ukufinyelela ekujuleni kokujikisa okufika ku-50 '(15 m). Futhi, lo dredge osayizi abaphakathi uqukethe i-18 ”ipompo futhi ifakwe izinjini ezimbili zedizili ezihlukile, enye yazo inikezelwe kumpompo we-dredge ukuze ukhiqize kahle.
Mhlawumbe inselelo enkulu ebhekene nabasebenzi abasebenza kulo msebenzi ifaka ukufinyelela okulinganiselwe emigwaqweni ewubhuqu lapho lina imvula njengoba imigwaqo igcwala okwenza kube nzima ukufinyelela endaweni okwenzeka kuyo ukubiyela kabusha. Ukufinyelela amabhange emifuleni endaweni ezungezile nakho kufakazele ukuthi kunzima ukungena kuyo futhi kunqunyelwe kakhulu. Kodwa-ke, ngaphandle kwalezi zingqinamba ezibonakalayo, ama-dernges ama-Ellicott Dragon ® akulula ukuwahlukanisa futhi ahlanganise kabusha ukuvumela iqembu ukuba liwele ezindaweni ezingafinyeleleki kalula eduze nomfula. Ezimweni ezinjengalezi kubaluleke kakhulu ukuthi ube ne-dredge ethembekile ekwazi ukunqoba lezi zinselelo ezinzima.
Ngenkathi ukwehlisa uMfula iSalado akuqinisekisi ukuthi izikhukhula zesikhathi esizayo ngeke zenzeke, kungenye yezindlela ezinomthelela omkhulu wokunciphisa noma ukunqamula izikhukhula zesikhathi esizayo. Lapho nje umfula usubuyiselwe esimweni semvelo ngokwengeziwe ngokususwa kokudonsa ngokweqile, amanzi okugeleza kwawo azohamba ngendlela yawo yemvelo ngejubane elinamandla. Ngaphezu kwalokho, isihlabathi siqoqwa kusuka emfuleni ukugudluzwa kwemizamo sizobe sesiphindiselwa kabusha futhi sisetshenziselwe ukuthuthukisa izindawo eziphansi, sithuthukise ukuphakama komhlaba, ngaleyo ndlela kusizakale nasekunciphiseni ukungahambi kahle kwezikhukhula ezibuya emiphakathini elele phansi.
Qala Iphrojekthi Yakho Yokukhipha Umfula Nge-Ellicott
Izindaba Nezigaba Ezifundwayo
Izinhlobo Ezihlukile Zokukhipha Udaka
Amadamu & Ukuchithwa
I-Mining Sand kanye neGravel
Amachweba, Amachweba Nemigwaqo Yamanzi
U-Ellicott Dredges ungumholi wezimboni wama-dredges akhiwe ngekhwalithi. Igama lethu lomkhiqizo lixhunywe emisha, ekukhiqizweni nasekuthembekeni.
Ikhwalithi Nenqubomgomo Yemvelo
Isitaladi i-1611 Bush
IBaltimore, MD 21230, e-USA
I-Free Toll: + 1 888-870-3005
I-Dredge Operator Training
Isand & Gravel Mining / Dredging
Amachweba, amatheku, nokwehliswa kwamanzi
Ukudonswa kabusha kokubuyiselwa kogu
Izifundo Ze-Dredging Case
I-copyright 2019 Ellicott Dredges, LLC, - Wonke Amalungelo Agodliwe. Buyekeza yethu Inqubomgomo yobumfihlo. Iwebhusayithi ngu Vikela futhi Drio.